Degso Beast Battle Simulator loogu talagalay Windows
Degso Beast Battle Simulator
Bilaash Degso loogu talagalay Windows
Degso Beast Battle Simulator,
Beast Battle Simulator waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay ciyaar dagaal bahal ku salaysan oo fiisikis ah.
Waxaan abaabulnaa dagaalo u dhexeeya dinosaurs iyo xayawaanka duurjoogta ah ee Beast Battle Simulator, ciyaar jilitaan u saamaxaya ciyaartoydu inay galaan dagaalo waalan. Dagaalladan oo ay ku jiraan xisaabinta fiisigiska dhabta ah ayaa jira, waxaan ku goaamin karnaa tirada xayawaannada iyo dinosaurs -ka aan dhigi doonno fagaaraha. Waxaa sidoo kale jira qaabab kala duwan oo ciyaarta ah. Qaabka sanduuqa sanduuqa, waxaad ku goaamin kartaa tirada dinosaurs iyo xayawaanka, xaddiga waxyeellada iyo caafimaadka, oo waxaad dhigtaa bahallada aad abuurtay goobta dagaalka. Waxaad sidoo kale ku ciyaari kartaa ciyaaro kubbadda cagta Beast Battle Simulator. Qaabkan, kooxo bahallo ah ayaa lagu dhejiyaa garoonka kubbadda cagta cayaarahana waxaa lagu samayn karaa dagaal.
Beast Battle Simulator wuxuu sidoo kale na siinayaa fursad aan ku qalabeeyo bahalkeena hub. Waxaad ku qalabayn kartaa dagaalkaaga T-Rex miniguns-ka, jaakadaha bam-gacmeedyada ama dab ololaya. In ka badan 30 nooc oo ah dinosaurs iyo xayawaan, xulashooyinka hubka ee kala duwan, iyo qaababka dagaalka ayaa isugu yimaada ciyaarta. Ciyaartoydu waxay la wareegi karaan dinosaurka ama xayawaan kasta oo ay rabaan inta lagu jiro dagaallada.
Shuruudaha nidaamka ugu yar ee Beast Battle Simulator waa sida soo socota:
- Windows 7 nidaamka hawlgalka
- 3 GHz processor laba geesood ah
- 4GB oo RAM ah
- Kaarka garaafyada taxanaha ah ee GeForce 5
- 2 GB kaydinta bilaashka ah
Beast Battle Simulator Noocyada
Horumar: DOG HOGGLER
RimWorld waa gumeysi cilmiyaysan oo uu wado sheeko-yaqaan caqli ku saleysan AI. Waxaa...
Autobahn Police Simulator 2 waa ciyaar jilitaan oo u oggolaaneysa ciyaartoydu inay u dhaqmaan sidii...
Simulator -ka Dab -demiska waa mid ka mid ah cayaaraha jilitaanka dab -damiska ugu fiican ee aad ku...
Beeraha Saafi ah 2018 waa ciyaarta jilitaanka cusub ee Techland, oo aan si fiican ula soconno...
Tusaalaha Bilayska: Saraakiisha Patrolku waa ciyaar aad ku biirto ciidanka bilayska ee magaalada...
Simulatorka duulimaadka ee Microsoft ayaa sii wada inuu ku afuufo dadka isticmaala noocooda cusub....
Beeraha Beeraha, dhismaha beerta ugu fiican iyo ciyaarta maareynta, wuxuu u soo baxaa sida Farming...
Beast Battle Simulator waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay ciyaar dagaal bahal ku salaysan oo...
Fly Simulator waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay jilitaan duulimaad oo kuu oggolaanaya inaad ku...
Simulator -ka Dhismaha PC waa ciyaar dhisme kombiyuutar oo ku siin kara madadaalo iyo macluumaad...
Simulator Rat waxaa lagu qeexi karaa ciyaar badbaado leh oo leh ciyaar xiiso leh oo u oggolaaneysa...
Mechanic Simulator 2018 waa isku xirka ugu dambeeya ee taxanaha ciyaarta jilitaanka ee caanka ah. ...